Laamaha amniga gobolka Nugaal oo dad u soo qab-qabtay Qaraxii lagu laayay shaqaalaha QM – Radio Daljir
Laamaha amniga gobolka Nugaal oo dad u soo qab-qabtay Qaraxii lagu laayay shaqaalaha QM
Abriil 25, 2015 9:44 b 0
Sabti, Abriil 25, 2015 (Daljir) — Taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal, Axmed C/llaahi Samatar (Layli) ayaa sheegay in ay jiraan dad loo soo qab-qabtay qarax is-miidaamin ahaa oo maalmo ka hor Garoowe lagula eegtay shaqaale ka tirsanaa Qaramada Midoobay.
“Wixii ka dambeeyay maalinkii u qaraxu dhacay waxaa socday howl-gallo baaritaanno ah, waxaana hadda aan gacanta ku haynaa shakhsiyaad lala xiriirinayo qaraxaas,: ayuu sheegay taliyaha oo la hadlayay Warbaahinta.
“Ciddii ay ku cadaato arintan waxaa loo gudbin doonaa guddigii ay dowladdu u saartay si loo horkeeno sharciga,“ ayuu mar kale yiri taliyaha oo xusay in baaritaanada ka dib qofkii danbi lagu waayo la sii dayn doono.
Waxaa kalo masuulkan uu sheegay in amniga magaalada Garowe aad loo adkeeyay ,iyadoo ay jiraan amarro lagu soo rogay mulkiilayaasha hoteelada Garowe si looga hortago weerarro hor leh oo ka dhaca magaalada sida uu sheegay taliyaha.
“Bulshada waxaa looga baahan-yahay in ay caawiyaan booliska si loo helo xogta cid kasta oo qorshaynaysa in ay weerar ka fuliso Garowe” ayuu mar kale yiri Layli, iyadoo dhawaan magaalada Garowe laga hirgaliyay xafiis isku xiri doona bulshada iyo booliska.
Ugu dambeyn, toddobo qof oo uu ku jiro ruuxii is-miidaamiyay ayaa ku naf-waayay qarax ka dhacay meel ku dhow xafiiska Qaramada Midoobay ay ku leedahay magaalada Garowe, waxana weerarkan siyaabo kala duwan u cambaareeyay madaxda ugu saraysa QM oo ku jiro Bankimoon.
Al-shabaab oo sii daysay Shaqaale ka tirsan hay’adda MSF